Gaas oo dood ka qaba heshiiskii Jabuuti “Cid gaar ah kuma takrifali karto arrimaha Masiiriga ah” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kasoo horjeestey qaar kamid ah qodobadii kasoo baxay kulankii labo maalmood kahor ay dalka Jabuuti ku yeesheen Madaxweynaha Dowlada Federaalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo.
Waraysi uu siyey VOA-da wuxuu ku sheegay in Puntland saluugsan tahay qodobada qaar gaar ahaan qodobka la xiriira maamulka hawada oo sida uu tilmaamay wax ka bedel lagu sameeyey.
Gaas ayaa xusay in heshiiska maamulka hawada ee horay loo saxiixay saddex geesood ahaa islamarkaana Puntland, dowlada Federaalka iyo Somaliland si wadajir ah u saxiixeen balse hadda lagu soo koobay labo dhinac oo qura.
Haddii maamulka hawada dib loogu soo celinayo Muqdisho wuxuu sheegay inay soo dhoweynayaan balse aanay ogoleyn in hawada Soomaaliya oo dhan laga maamulo magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland.
“Hawada Soomaaliya ha lagu wareejiyo Somaliland waxay aniga iila muuqataa fikir qaldan oo aan shaqeynaynin…hawada Soomaaliya hal meel baa laga maamuli jirey waana Muqdisho” ayuu yiri Gaas.
Dr. C/wali Gaas ayaa sheegay in heshiiska Maamulka Hawada ay horay qeyb ugu aheyd Puntland, balse uu la yaaban yahay in dowladda Soomaaliya iyo Somaliland ay isku koobeen sida uu yiri.
“Qodobka hawada Puntland ahaan dacwo ayaa ka qabnaa, barnaamijkan hawada aniga bilaabay markii aan ahaa Wasiirka Qorsheynta dowladdii KMG aheyd, bishii May 2011 ayaa isugu tagnay Nairobi, heshiis saddex geesood ah Puntland, dowladda Federaalka iyo Somaliland ayaa halkaas ku kala saxiixanay, goor dambe ayaa moodaa in Soomaaliya iyo Somaliland loo wareejiyay, arrintan ayaa wal wal ka qabnaa, waana fikir qaldan oo aan shaqeyn, hadii Hargeysa loo wareejinaya waxaa oraneyna wada hadalka saddex geesoodka ahaa goor ay Puntland ka baxday ma garanayo ee Muqdisho waa caasimadii Soomaaliya halkaas haloo wareejiyo ama waxaa oraneynaa Garowe haloo soo wareejiyo”ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Dr. C/wali Gaas ayaa sidoo kale sheegay in marka laga hadlayo masiirka arrimaha Soomaaliya aanay kaligood ku koobnaan karin madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Somaliland, loona baahan yahay in Puntland ay arrimahaasi qeyb ka noqoto.
“Arrimaha masiiriga ku saabsan ee masiirka Soomaaliya cid gaar ah wax ku koobnaan doono ma noqoneyso ama bisha dambe oo ka hadli karaan Mudane Xasan Sheekh iyo Mudane Axmed Siilaanyo, arrimaha masiiriga mid Soomaaliya dhan quseeyo waaye cid gaar ah arritaas ku takri fal karto ma jiro, anaga Puntland ahaan Sool, Sanaag iyo Ceyn ayay taabaneysa xuduudaheeda taabaneysa mid keligood go’aan ka gaari karaan ma jiraan, waxaa loo baahan yahay in Soomaali oo dhan laga talo geliyo” ayuu yiri Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas.
Heshiiska madaxweyne Xasan Sheekh iyo Siilaanyo ku dhexmaray dalka Jabuuti 21- December 2014, ayaa waxaa dhexdhaxaadiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, Ismaaciil Cumar Gelle.